SOICARE inotonhorera mhute humidifier diffuser 5.5L yepamusoro zadza ultrasonic humidifier ye hypochlorous acid mvura uchishandisa, China SOICARE inotonhorera mhute humidifier diffuser 5.5L yepamusoro zadza ultrasonic humidifier ye hypochlorous acid mvura uchishandisa Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
Yakaderera / Yakakwirira
1. Yakareba nguva uye Inesimba humidifying: Iyi humidifier ine hombe yemvura tangi 5. 5L, mhute inogona kupedza maawa makumi maviri nehurefu hwepamusoro, uye maawa makumi mashanu nemashanu ane yakaderera mwero. Inokodzera hofisi hombe, imba yekutandarira etc.
2.Ne yakakosha ultrasonic atomizer ndiro, ino humidifier sutu ye hypochlorous acid mvura uchishandisa, unogona kuishandisa disinfection nyore.
3. Iine basa remafuta akakosha anoenderana. Uine imwe yekuwedzera hwema hwema bhonasi, mafuta akakosha anogona kuwedzerwa uchishandisa donhwe, zvichibatsira kugadzira nharaunda inozorodza uye nekuvandudza yako yekurara mhando.
4. Pamusoro zadza dhizaini, zviri nyore kuzadza. Iyo yepamusoro-Zadza dhizaini inogadzira humidifier nyore kuzadza uye kuchenesa pasina dambudziko rekudzosera tangi remvura. Uye ichavhara auto-yakavharwa kana mvura yapera kana iyo nhanho yemvura inodonha.
5. Yedu humidifier ine inogadziridzwa mhute level bhatani. Iwe unogona kugadzirisa huwandu hwehuwandu hwemhute nekubata bhatani uye unogona kunakidzwa zvachose neyakagadzikana humidify nharaunda nekugadzirisa yako yakanaka mwando.
6. Inzwi rinoshanda risingasviki 35dB, rinokupa nzvimbo yakanyarara. Iwe hauzonzwa ruzha kunyangwe kana uchiisa pane yako husiku husiku.
7.Nemunyowani weiyi ye ultrasonic, unogona kuwana 360 ° inoshanda humidification: Inogona kunyorovesa mweya kweanosvika 30H yekuenderera mberi kwekushanda, 360 ° yunifomu yunifomu, kuti ugone kufema mweya mutsva kunyangwe uri kure neunogonesa, kunhuwidza nyowani mweya kunge uri musango.
8. Kupfuura Humidifier: Sezvo yedu humidifier inouya ne7 Ruvara LED Mwenje inokodzera imba, hofisi uye kwese kwaunoda kuiisa, ndicho chakanakisa chipo chemhuri yako uye shamwari.
7 yakajeka LED mwenje
Auto magetsi-bvisa kana pasina mvura
SP-G08 180ml huni ceramic ultrasonic inonhuhwirira diffuser yearomatherapy
Batanidza mafuta anokosha Antibacterial Chengetedza yakakosha Mafuta eiyo Diffuser
SOICARE 3.7L Yakapora Mist Aromatherapy Yakakosha Oiri HCIO Humidifier